चुनावले स्थिरता ल्याओस्
दोश्रो चरणको निर्वाचन पर्सी सम्पन्न हुनेछ र यो चुनावपछि संविधानको कार्यान्वयन हुने विश्वास गरेका छन् राजनीतिक दलहरुले ।
संविधानको कार्यान्वयन हुनका लागि जनतामा संविधानप्रति विश्वास हुनुपर्छ र नेताहरुप्रति आश्वस्तता । के निर्वाचनको परिणामपछि जनताले अपेक्षा गरेको विधिको शासन र नेताहरुमा नैतिक चरित्र स्थापित होला ? जबसम्म नेतामा नैतिकता हुन्न, कसरी विधिको शासन हुनसक्ला र ?
नैतिक धरातल हो, जसले अहिले निर्वाचनप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई बुझाउन सक्छ, मूलधारमा ल्याउने आधार शक्ति पनि दिनेछ । जब निर्वाचनमा जितेर आएका र सत्ता सञ्चालनमा पुग्ने व्यक्तिहरु फेरि उही अनैतिक, उही भागबण्डे, उही सिण्डिकेट, उही भ्रष्टाचार र माफियाकरणमा लिप्त भए भने कसरी संविधान सफल हुनसक्ला ?
त्यसै पनि हिन्दु र राजतन्त्रको मुद्दा काँचै छ र यो राष्ट्रिय मुद्धाको छिनोफानो नभईकन शान्ति र स्थिरताको कल्पना नै गर्न सकिदैन । त्यसमाथि बैद्य, विप्लव, र अन्य राजनीतिक शक्तिहरु पनि छन् जसले स्पेश खोजिरहेका छन्, भूमिका खोजिरहेका छन्, यी सबैको समष्टिगत विश्वास नजित्दासम्म लोकतन्त्र नामको मात्र लोकतन्त्र हुने र केही व्यक्ति र शक्तिका लागि लुटिखाने अवसरमात्र हुनसक्छ ।
लामो समयदेखि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुकले स्थिरताका लागि निर्वाचनमात्र होइन, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको पनि उत्तिकै खाँचो अनुभव गरिरहेको छ । यो खाँचोको पूर्ति निर्वाचनले मात्र सम्भव छैन । निर्वाचनका साथै निर्वाचित व्यक्ति र शक्तिहरुले असन्तुष्ट ठूलो पंक्तिलाई संसदीय पद्धतिमा सन्तुष्ट पार्न सक्ने खुवी देखाउनै पर्छ । अन्यथा फेरि पनि उही अराजकता, उही अस्थिरता र द्वन्द्वको चर्कदो स्वरुपमा मुलुक झुण्डिरहनुपर्नेछ ।